China Roller mhete fekitori uye vagadziri | Dongxing
KOCKS mill roll roll
Mechanical rinoumba goridhe R ...
Cemented carbide rwakapetwa mhete
Carbide shinda mupumburu mhete
Icho chikamu chiri pakati kana kunze kweiyo groove pane iyo roll muviri weiyo profil roll. Zvinoenderana nechinzvimbo chakasiyana cheringi rwakapetwa pamupumburu, inogona kuve yakakamurwa kuva yekupedzisira roll roll uye yepakati roll mhete.
Yantai Dongxing indasitiri (makemikari akaumbwa uye epanyama uye emagetsi michina)
Ongorora: zviri mukati meWC ndicho chikamu chekudyisa, izvo zvirimo, kuomarara uye kuwanda kwezvakagadzirwa zvigadzirwa zvinogona kuchinjika nezve 2%.
1. Kutsungirira yakasimba inotenderera mutoro
Iyo yekucheka dhayamita nzvimbo yepamberi rack yekupedzisa rolling inosvika 50mm2, uye iyo yekucheka dhayamita nzvimbo yepamberi-yekupedzisa rolling inosvika 100mm2. Yakakura kudaro yakawanda yekuumburuka deformation inoda kutenderera simba remazana enewtons. Kune chitubu chesimbi, simbi yebhora uye imwe simbi yakakosha, simba rayo rinotenderera rakakura.
2. Mira yakakwira frequency frequency ichichinjisa simba rinokanganisa
Iyo yekupedzisira furemu V = 100m / s, ichitora yekunze dhayamita modhi 170 semuenzaniso, iyo frequency frequency F = 11240 nguva / miniti. Kana V = 80m / s, dhayamita yekunze yeringi ndeye 173 semuenzaniso, f = 8836 nguva / miniti.
3, pasi peacid uye alkali kemikari ngura
Sezvo kutenderera kwemvura inotonhorera kune imwe acid uye alkaline, iyo electrochemical reaction ye roll roll, inonzi galvanic cell reaction, inoitika mune ino nharaunda. Mhedzisiro yacho yakaunza ringi yakatenderera. Iyo tembiricha yakakwira inowedzera kukurudzira kuita uku.
4. Mira wakaenzana iwo wakawandisa frequency uchichinjisa kupisa kwemhepo
Mushure mokunge mhete yakungurutswa uye kurumwa mukati meiyo inopisa tambo waya, kupisa kunobva kwairi kunogamuchirwa. Iwo matanda newaya anobva atonhodzwa. Musiyano wekupisa pakati pechiso chemhete uye neyakaenzana mukati maro uye kwese kwakatenderedzwa kunokonzereswa neyakaenzana yekupisa kupisa. Musiyano mukuwedzera kwemitsara kana kudzvinyirira kunokonzerwa nemusiyano uyu mukutonhora kunoguma nekupisa kunetseka. Nekuti chero poindi iri pamusoro pechiringi irinodziya uye inotonhorera mukukwirira kwakawanda shanduko, iko kupisa kwekushushikana zvakare kunokanganisa ringi iringi mukukwirira kwakawanda shanduko. Mhedzisiro yekuchinjanisa kupisa kwemhepo pane roller mhete ndiko kupisa kwekuneta kutsemuka, kunova iko kuumbwa kweyakajairika kamba.
5. Kutsungirira kumhanya kwepamusoro kupfeka uye abrasion
Iyo inotenderera groove inoiswawo kune yekumhanyisa kumhanyisa uye kusakara apo iringi yekutenderera iri kuumburuka uye ichitenderedza iyo yekumhanyisa tsvimbo uye waya. Uye zvakare, zvidimbu zvakaoma uye zviyero zvesimbi oxide mumvura inotonhora zvinokonzeresa kukukurwa uye abrasives.
1. Iva nechokwadi chekugadzirisa kwekugadzirisa kwechindori chendaneti uye uone kuti inosangana nezvinodiwa zvekudhirowa.
2. Ita shuwa yemukati mhando yeiyo ringi mhete, 100% kuburikidza nekusa-kukuvadza kuyedza; Kuiswa mucherechedzo kweringi kunoenderana nemirau yekambani yako uye kunodzivirira zvinhu zvinokanganisa zvine mwero.
4. Ita shuwa kuwiriranwa kwemhedzisiro yeinowanikwa roll roll mune inoshanda inoshanda roll dhayamita. Iyo yemhando yekuvimbisa nguva yemhete yekumonera ndiyo inoshanda inoshanda roll roll nguva yemhete.
5. Panguva yekushandisa pamhepo zvindori zvemakambani edu, isu tichaitisa mhando yekutevera kuti tiwedzere kugadzirisa chigadzirwa. Kana paine chero matambudziko ehunhu ehuringi zvindori pane saiti, isu tinopa yakajeka uye zvine mutsindo kupindura mukati maawa gumi nemaviri.
Pashure: Yakanyatsogadzirirwa Yakakwira-Yekumhanyisa Tungsten Carbide Roller - Carbide tambo roll roll - Dongxing
Zvadaro: Carbide shinda mupumburu mhete
Carbide Thread Roller Mhete
Cemented Carbide Roller Mhete
Mapuraneti Thread Roller Mhete
Tungsten Carbide Roller Mhete
Tungsten Carbide Roller, Tungsten Carbide Kutenderera, Tungsten Carbide Roller Mhete, Machine Chikamu, Yakasimbiswa Carbide Roll, Mill Kutenderera Rings,